Jordi Alba oo ugu dambeyn qaatay go’aankiisa kama dambeysta ah ee ku aaddan mustaqbalkiisa Barcelona – Gool FM
Dajiye June 30, 2021
(Barcelona) 30 Juun 2021. Daafaca kooxda Barcelona ee Jordi Alba wuxuu diirada saarayaa ka qeyb qaadashada Koobka Qaramada Yurub ee xulkiisa Spain, mana doonayo inuu ka hadlo wax ku saabsan mustaqbalkiisa.
Qaar ka mid ah warbixinnada ay daabaceen wargeysyada ayaa soo wariyay xiisaha ay Inter Milan u qabto qandaraaska daafaca reer Spain, laakiin Jordi Alba ayaa u muuqda mid daacad u ah kooxda Barcelona.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Sport” ee dalka Spain, Jordi Alba ma doonayo in laga mashquuliyo ka qeyb qaadashadiisa xulka Spain ee koobka Euro 2020, wuxuuna sidoo kale doonayaa inuu dhameysto qandaraaskiisa Blaugrana.
Yeelkeeda, Jordi Alba wuxuu ku haminayaa inuu sii joogo waqti dheer ama uu kubadda cagta kaga fariisto kooxda Barcelona haddii uu awoodo, sidaas darteed wuxuu u muuqdaa mid ku wareersan wararka dhawaan leysla dhax marayay.
Barcelona ayaa durbaba ka war qabta go’aanka Jordi Alba kaddib markii ciyaaryahanka laftiisa uu ku wargaliyay agaasimayaasha ciyaaraha ee kooxda inuu doonayo in sanado kale uu sii joogo garoonka Camp Nou.